इटालियनहरू छन् एक गर्व मानिसहरूलाई र दुवै ड्रेस कसरी थाहा गर्न अधिकतम प्रभाव लागि कुनै पनि अवसर — स्थानीय डिजाइनर हुन् संसारको सबै भन्दा राम्रो । नरम र सम्मानजनक, स्मार्ट मनोवृत्ति रैंक मा उच्च सूची को मनमोहक पुरुषहरु. राम्रो-शिक्षित र सामान्यतया राख्दा राम्रो रोजगार, आफ्नो इटालियन ल्याउनेछ प्रेम र हास्य मा आफ्नो सम्बन्ध छ । हुनत, कारण आफ्नो ल्याटिन जीन, तिनीहरूले हुन सक्छ आगोको र छिटो स्वभाव, तिनीहरूले आफ्नो समस्या समाधान को कुरा मा क्षण, र शान्ति र रिटर्न वातावरण छ । जीवनको बाटो छ, आराम र गर्न केन्द्रीय भलाई को सबै इटालियनहरू. तिनीहरूले ठूलो हो महाराज र ठूलो होस्ट, र आफ्नो परिवार-केन्द्रित परम्परा, तिनीहरूलाई दिन को क्षमता बनाउने सबैलाई घर मा महसुस गर्न । सबै, तिनीहरूले आवेग पूर्ण र ठीक के थाहा उनि चाहनुहुन्छ. हुँदासम्म भइरहेको निर्णायक र स्वतन्त्र, इटालियन मानिस प्रेम र कदर आफ्नो साथी र यकीन छ कि आफ्नो सम्बन्ध निम्नानुसार एक सम्म सफलता गर्न सडक छ । आधुनिक इटाली देखेर विशिष्ट भूमिका लिङ्ग गुमाउने र शक्ति, पुरुष र महिलाहरुको थाहा छ र भन्ने मूल्यांकन सहयोग बीच आवश्यक छ मर्मतसम्भार मा एक राम्रो सम्बन्ध छ । धर्म को एक महत्वपूर्ण भाग हो आफ्नो संस्कृति र धेरै छैन भने, सबै भन्दा, परमेश्वरको विश्वास छ । विवाह धेरै सामान्य मा, यो देश र जनताको लागि आदर परम्परा र संस्कृति गर्छन तिनीहरूलाई तिर वेदी. त्यसैले, तपाईं छौं कि फ्रेन्च, अमेरिकी, वा कुनै पनि अन्य राष्ट्रियता, इटाली लागि तयार हुन साझेदारी गर्न नेतृत्व तिर विवाह । शिक्षा इटाली मा छ, अप-मिति र आधुनिक छ, र अधिकांश इटालियनहरू, पुरुष र महिला, यो लाभ उठाउन. मानिसहरूलाई प्रेम फैशन को अर्थ तिनीहरूले कसरी थाह पोशाक हेर्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो — सुन्दर, रमणीय र स्टाइलिश, पुरुष र महिला दुवै छ । इटालियन संस्कृति र न्यानो इटालियन मौसम अनुमति, तिनीहरूलाई रमाइलो गर्न आफ्नो जीवन अधिकतम गर्न मा एक स्वतन्त्रित तनावमुक्त वातावरण छ । हरेक शहर, शहर र गाउँ, स्थानीय खर्च हुनेछ समय को एक धेरै मा जीवंत कफी बार, अक्सर हेर्न राहगीरों-द्वारा. तपाईं फेला एक राम्रो, सहानुभूति मान्छे? यति भने, मा स्वागत छ संसार सम्पूर्ण विभिन्न छ एक तपाईं देखि थाहा डेटिङ पश्चिमी मानिसहरू । हरेक राष्ट्रका र संस्कृति यसको आफ्नै विशेष बदलाव, केही राम्रो, केही खराब, हो, यो पनि राम्रो पुरानो अमेरिकी तिर्नुपरेको छ प्लस र माइनस अंक छ । त्यसैले, को लक्षण हो के मान्छे देखि यो सुन्दर लम्बी देश । इटाली, एक मध्यम आकारको देश, मा धनी संस्कृति, झुन्डियो र खुट्टा जस्तै-देखि दक्षिणी युरोप.
हामी पहिले भने, इटालियनहरू प्रेम फेसन हुन सक्छ, जो याद मा लगभग हरेक सडक कुना मा, विशेष गरी मा मिलान । तिनीहरूले पनि प्रेम थिएटर, पर्व, कला, र ठूलो खाना — भू-मध्य भोजन — किन कारण एक तिनीहरूले सामान्यतया छन् यस्तो राम्रो स्वास्थ्य. धेरै एकल पश्चिमी महिला खुसीसाथ विनिमय आफ्नो घर-हुर्केका सबै-अमेरिकी मान्छे को लागि एक इटालियन. किन । कारण सरल छ र राम्रो-ज्ञात गरेर सबै इटालियन महिला: पुरुष देखि यो सुन्दर, घाम देश प्रेम, जीवन र बाँच्न दिने, यो यो आफ्नो सबै मा प्रत्येक र हरेक अवस्था छ । र, महिला संयुक्त राज्य अमेरिका देखि हुनेछ भनेर थाह खुसी हुन, किनभने आफ्नो राम्रो शिक्षा, सबैभन्दा इटालियन बोल्न सक्छन् धेरै भाषाहरू सहित, अंग्रेजी । त्यसैले, जब तपाईं संग बाहिर जान उहाँलाई मा सबै-महत्त्वपूर्ण पहिलो तारीख मा, तपाईं पक्का हुन सक्छौं, त्यहाँ हुनेछु धेरै रोचक कुराकानी पछि कि राम्रो उज्ज्वल मुस्कान । खाना छ, छैन सिर्फ एक आवश्यकता, यो पनि स्थापित र सम्बन्ध राख्छ बीचमा परिवार र साथीहरू कि वा छैन, यो इटालियन मान्छे छ एकल । जो कसैलाई प्रवेश एक इटालियन मान्छे घरमा हुनेछ, असफल बिना, प्राप्त बलिको भोजन वा पेय, र सामान्य दुवै छ । सामान्यतया, नाश्ता हुन्छन् रोटी रोल, मक्खन, बलियो कफी, र फल वा रस. परंपरागत, एक ठूलो भोजन सेवा थियो, र पास्ता थियो आम भाग भोजन को सबै क्षेत्रहरु मा साथ, सूप, रोटी, र सायद मासु वा माछा । खाने हुन्थे को. अधिक हालै, परिवार अप्ठ्यारो हेर्न साँझ भोजन मुख्य रूपमा परिवार भोजन । कस्टम को परिवर्तन छ, र एक भारी भोजन सक्छ अब व्यावहारिक हुन. त्यहाँ छन् मा क्षेत्रीय मतभेद के खाएको छ र कसरी खाना तयार छ । सामान्य मा, अधिक बाछाको मासु खपत मा उत्तर छ, जहाँ खाना गर्छन हल्का हुन. दक्षिणी खाना पकाउने हुनुको प्रतिष्ठा छ भारी र अधिक पर्याप्त भन्दा उत्तरी खाना पकाउने. छन् विशेष खाद्य पदार्थ लागि विभिन्न अवसरमा. उदाहरणका लागि, त्यहाँ छ, विशेष सेन्ट जोसेफ गरेको रोटी, इस्टर रोटी संग कडा-उबला अन्डा, सेन्ट लुसी गरेको ‘आँखा’ को लागि उनको भोज दिन, र यो भोज सात माछाहरु लागि नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या छ । रक्सी दिनचर्या र सेवा संग सबै खाना — प्रेम गिरने छ. एक मान्छे संग इटाली देखि, तपाईं पक्का पनि प्रेम रक्सी । वर्ग र जातको इटाली मा छन् एक विशाल फरक धन बीच उत्तर र दक्षिण । त्यहाँ पनि सामान्य सामाजिक वर्ग हो कि फेला औद्योगिक समाज । इटाली छ एक उच्च बेरोजगारी दर, र मतभेद धनी र गरिब बीचको नमूदार छन्, जबकि नयाँ आप्रवासी बाहिर खडा किनभने तिनीहरूले आउन गरीब देशहरू. सरकार कायम गर्न प्रयोग गर्न एक विशाल सामाजिक कल्याण सञ्जाल कटौती गरिएको छ हाल को वर्ष मा फिट गर्न को आवश्यकताहरु युरोपेली संघ छ । यी बजेट कटौती खसेको छ मा गरीब.
श्रम विभाजन गरेर लिंग
परंपरागत, यो इटालियन मानिस काम गर्न बाहिर गए र महिला गरे हेरचाह घर. दोस्रो विश्वयुद्धको पछि, भन्ने व्यवस्था परिवर्तन तेजी छ । जबकि पुरानो शिक्षामा लैङ्गिक र पुरुष प्रभुत्व भरिपूर्ण केही ग्रामीण क्षेत्रमा, इटालियन महिलाहरुको गरिएको छ प्रसिद्ध लागि आफ्नो स्वतन्त्रता, साँच्चै धेरै र ऐतिहासिक काम गर्दछ भनेर बाहिर देखाउँदै आफ्नो ग्रहण विगत दमित थियो, अक्सर. हाल, महिलाहरु भाग मा हरेक पक्ष, राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक जीवन छ । महिला बराबर हो, व्यवस्था अन्तर्गत र धाउन विश्वविद्यालय र काम मा श्रम शक्ति संख्या संग आफ्नो शेयर को जनसंख्या छ । को एक चिन्ह महिला स्वतन्त्र इटाली सबैभन्दा नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि भएको छ । यो साँचो हो, तर, त्यो बालिका प्रदर्शन जारी नै धेरै घरेलू कार्यहरू तिनीहरूले विगतमा गरे पनि नयाँ जिम्मेवारी । को नातेदार स्थिति महिलाहरु र पुरुषहरु. इटालियन संस्कृति, पुरुष थिए दिइएको अवस्था र उपचार । महिला खटाइयो को स्थिति ‘प्राण’ को परिवार, जबकि पुरुष थिए, ‘टाउको।’ पुरुष थिए, समर्थन र रक्षा परिवार गर्दा महिला खडा छोराछोरीलाई राखिएको र आफूलाई स्वच्छ रूपमा यति छैन निरादर को परिवार । आज, सबै कुरा फरक छ, र यो पुरातन लिङ्ग भूमिकाहरूको खेल्न छैन कुनै पनि भाग मा आज समाज । महिलाहरुको सामान्य मा सधैं थियो भन्दा बढी शक्ति तिनीहरूले थिए परंपरागत गर्न अनुमानित छन्. यी दिन, इटालियन महिला युरोप मा. विवाह । विगतमा, विवाह थिए व्यवस्थित, र महिला ल्याएको दाइजो मा सम्बन्ध छ । तर, त्यहाँ थिए सूक्ष्म तरिका मा जो छोरा र छोरी सक्छ नज आफ्नो आमाबाबुले मा व्यवस्था सही व्यक्ति संग. गरीब वर्ग, वास्तवमा थियो, अधिक स्वतन्त्रता मा चयन भन्दा व्यक्तिहरूलाई. हुन सक्छ र अक्सर थिए । आज, विवाह छ रूपमा मुक्त कहीं दुनिया मा, र ती लागि बाहेक प्रवेश गर्ने पादरी, लगभग सबै इटालियंस विवाह । त्यहाँ छ, तथापि, अझै पनि एक अनुकूल मा धेरै परिवार को लागि एक बच्चा रहन अविवाहित भनेर उहाँले वा त्यो गर्न सक्षम छ हेरचाह वृद्ध आमाबाबुले. सम्बन्धविच्छेद थियो निषेधित हाल सम्म. त्यहाँ भएको छ एक धेरै को बारेमा जानकारी उपलब्ध पुरुष इटाली देखि, यो केही राम्रो र सायद केही आवाज एक सानो डरावना छ । तर सधैं रूपमा, सबै भन्दा राम्रो, र वास्तविकता मा, यो केवल दृश्य को बिन्दु, आउन गर्नुपर्छ आफ्नो अनुभव किनभने, सबैलाई विभिन्न छ । जहाँ तपाईं हेर्न र मा जो देश, तपाईं गर्न मौका छ कि पाउन, तर त्यहाँ पनि मौका पाउन, भन्ने कुरा मनमा राख्न डेटिङ को बाहिर आफ्नो सांस्कृतिक मान्यता आवश्यकता केही समायोजन । यात्रा, तर यो पनि तपाईं आवश्यकता छ भनेर बुझ्न उहाँलाई गर्नुपर्छ द्वारा नाराज एक गुण छ भन्ने गहिरो मा आफ्नो पहिचान छ । तापनि अक्सर सुधार केही डिग्री, भूल छैन भन्ने सबैलाई अद्वितीय छ, र तपाईं हुँदैन आशा वा माग कसैले बस किनभने तिनीहरूले पहिचान को भाग रूपमा एक निश्चित समूह । साधारणतया, मिति एक इटालियन मानिस मात्र किनभने तपाईं प्रेम पिज्जा र पास्ता र आशा आफ्नो परिवार रुचि को डाली को यो, तयार छ कि, तपाईं निराश हुन सक्छ. निश्चित डेटिङ बारेमा यी मान्छे. तपाईं सधैं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ पाउन आफ्नो सपना साथी. कसरी बारे मान्छे देखि फ्रान्स, अष्ट्रिया, स्पेन, वा चेक गणतन्त्र
← र र्याङ्किङ्ग को सबै भन्दा राम्रो डेटिङ साइटहरु मा इटाली
डेटिङ लागि गम्भीर सम्बन्ध र विवाहको | "डेटिङ लागि विवाह" →